BS52 စီးရီး အိတ်ဆောင် ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော ရှာဖွေမီး
၁။အလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး မာကျောမှုမြင့်မားသည်။သဲဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော မျက်နှာပြင်သည် လှပသောအသွင်အပြင်ရှိသည်။
၂။အထူးမီးအိမ်၊ တာရှည်ခံ၊ စားသုံးမှုနည်းသော၊ စွမ်းအင်ချွေတာပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော၊ အလင်းရောင်စုစည်းမှုသည် ပျော့ပျောင်းသည် (အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင် ယာဉ်မတော်တဆမှုနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံ၊ အမှတ်အသားများ၊ လက်ဗွေရာများ၊ ဓာတ်ပုံများစသည်တို့)၊ တောက်ပသော အလင်းရောင်၊ 1200 lumen၊ ပျံသန်းမှုအကွာအဝေး 600 မီတာ၊ အလုပ်ချိန် 8 နာရီဆက်လက်၊ တောက်ပသော flux 600 lumen အလုပ်လုပ်ပါက၊ အလုပ်ချိန် 12 နာရီထက်ပိုသည်။
၄။၎င်းသည် စွမ်းအင်မြင့်မှတ်ဉာဏ်မဟုတ်သော ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးဘက်ထရီများကို လက်ခံသည်၊ ကြီးမားသောစွမ်းရည်၊ လေထုညစ်ညမ်းမှု၊ အားသွင်းမှုနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သည် ကောင်းမွန်သည်၊ နိမ့်ကျသော ကိုယ်ကိုတိုင်ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း၊
၅။ဗို့အားနည်းသောအကာအကွယ်နှင့် အမှားအယွင်းကို ဆန့်ကျင်သည့်ကိရိယာများဖြင့်၊ ပုံမှန်အသုံးပြုပြီးနောက် ၎င်းသည် အလိုအလျောက်သော့ခတ်ထားခြင်းမရှိပါက ခလုတ်ကို လော့ခ်ချနိုင်သည်။
၆။သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်၊ လက်ကိုင်၊ ပခုံးနှင့်အခြားအရာများပါရှိသည်၊ ကောင်းမွန်သောရေစိုခံ၊ ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။
1. ပုံမှန်ရွေးချယ်ရန် မော်ဒယ် သက်ရောက်မှု၏ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ၊ မော်ဒယ်၏ သက်ရောက်မှုနောက်ကွယ်တွင် Ex-mark ကို ထည့်သွင်းသင့်သည်။နမူနာပုံစံသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်အတွက် သက်ရောက်မှု+အမှတ်အသားအတွက် ကုဒ်။ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မီးခံနိုင်သော ဓာတ်မီး လိုအပ်သည်။အဲဒါတွေအရ၊ မော်ဒယ်ရဲ့သက်ရောက်မှုက BS52+ExdⅡCT6 Gb+20 ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်- BGD စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ မြင့်မားသောတိုင်မီးခွက်
နောက်တစ်ခု: dYD စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ(LED) မီးချောင်း
AD62 စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ မီးအိမ်
Model Implication Features 1. အကာအရံအား မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှု၊ ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသော ခိုင်ခံ့မြင့်မားသော အလူမီနီယံသတ္တုစပ်ဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်း ပုံသွင်းထားသည်။၎င်း၏ အပြင်ဘက်သည် အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ပေါက်ကွဲပြီးနောက် ဖိအားမြင့်သော ပလပ်စတစ်ဖြင့် ပက်ဖြန်းထားသည်။၎င်းတွင် ပလတ်စတစ်အမှုန့်များ၏ ခိုင်ခံ့သော ကပ်ငြိမှုနှင့် သံချေးတက်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်ပါသည်။အပြင်ဘက်တွယ်ကပ်များကို Stainless Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။2. မီးအိမ်အား မြင့်မားသော borosilicate glass ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ကြီးမားသော ထုတ်လွှင့်မှုနှင့် စွမ်းအင်မြင့်သော ရှော့တိုက်ခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
FCF98(T,L) စီးရီး ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော ရေလွှမ်းမိုးမှု (cast,...
Model Implication Features 1. ဘူးခွံအား 7.5% မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့် တိုက်တေနီယမ်အောက် 7.5% မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့် တိုက်တေနီယမ်ထက်နည်းသော စွမ်းအားမြင့် အလူမီနီယံအလွိုင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ရိုက်ခတ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး 7J ထက်မနည်းသော သက်ရောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။2. မြင့်မားသောချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော Stainless steel နှင့်ထိတွေ့ထားသောတွယ်ကပ်များ။3. နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ် LED မီးအရင်းအမြစ်၊ တစ်လမ်းသွားအလင်း၊ အလင်းပျော့၊ တာရှည်ခံမှု၊ အစိမ်းရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု၊ LED မှန်ဘီလူး၊ အလယ်တန်းအလင်းဖြန့်ဖြူးနည်းပညာ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအလင်းဖြန့်ဖြူးမှု၊ ယူနီဖောင်း ...
Model Implication Features 1. Aluminum alloy die-casting shell, မျက်နှာပြင်ကို လျှပ်စစ်ဖြန်းထားပြီး ပုံပန်းသဏ္ဌာန် လှပသည်။2. မူပိုင်ခွင့်ပြုထားသော multi-cavity တည်ဆောက်ပုံ၊ ပါဝါအပေါက်၊ အလင်းရင်းမြစ် ကပေါက်နှင့် wiring cavity အလောင်းများသည် သီးခြားဖြစ်သည်။3. မြင့်မားသော borosilicate tempered glass ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အဖုံး၊ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အဖုံးကို atomization ဆန့်ကျင်သော ဒီဇိုင်း၊ ၎င်းသည် မြင့်မားသော စွမ်းအင်သက်ရောက်မှု၊ အပူပေါင်းစပ်မှုနှင့် အလင်းပို့လွှတ်မှု 90% အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။4. မြင့်မားသောစတီးလ်နှင့်ထိတွေ့တွယ်ကပ်များ ...